အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 နှလုံး Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
sonitattoo ဇူလိုင်လ 16, 2016
ကျနော်တို့နှလုံးအစဉ်အမြဲမေတ္တာသည်ရပ်ကိုသတိထားပါဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လူတွေစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကိုဖော်ပြနိုင်ရန်နှလုံးတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုအောင် Little ကအံ့သြစရာကိုကြည့်ပါ။
နှလုံးတက်တူးထိုးနှစ်ခြိုက်, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းဆိုလိုသည်။ အဲဒီမှာ #heart ၏အခြားအဓိပ္ပါယ်များဖြစ်ကြပြီးထိုအအဓိပ္ပါယ်များသူတို့ကိုယ်စားပြုသောလမ်းမှလာကြ၏။ စိတျနှလုံးရေးဆွဲကြောင်းလမ်း wearer အရာတွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါအရောင်များ, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်တက်တူးထိုး၏အရွယ်အစားကအံ့သြလောက်အောင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတစ်ခုခုသည်။ သင်သည်မေတ္တာတရားကို၏ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်ကသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါနှလုံးကိုလည်းကြောင့်ထိုသို့ပြုကစားသောအရေးပါမှုအချို့ကိုဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသားများ၏နံပါတ်ကကိုယ်စားပြုသောသင်္ကေတလုပ်ရပ်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှကကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အချို့သောရဲရင့်ထုတ်ပြန်ချက်များအောင်၌သင်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုမိုနီးကပ်စွာသောနှလုံး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးတက်တူးသင်တို့ပတ်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သောအကောင်းဆုံးသောတက်တူးတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာရှားပါးနှင့်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဒီတက်တူးမြင်သောလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရှာတဲ့ #tattoo ဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေနေကြသောအခါ, ဒီတက်တူးထိုးရိုးရိုးကြောင့်အလှအပနှင့်အရေးပါမှု၏အဘို့သွားကြဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှလုံးတက်တူးထိုးလူကြိုက်များဒါပေမယ့်လည်းမက်ဆေ့ခ်ျကဆက်ပြောသည်ကြသောအခါကိုကြည့်ရှုရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မသာဖြစ်ပါသည်။ မြှားကိုလည်းပုံပြင်ပြောပြရန်ကဆက်ပြောသည်နေကြသည်။
1 ။ နောက်ကျောအပေါ်အထူးနှလုံးသား Tattoo စိတ်ကူး
ချစ်ကြည်ရေးအစဉ်အမြဲဖြစ်သင့်! မတ်ေတာသကျနော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကိုဆိုလိုတာ challenges- သတ်ဖြတ်မရနိုင်ပါ။ ဒါက #heart တက်တူးထိုးကမ္ဘာတဝှမ်းအလွန်လူကြိုက်များတက်တူးထိုးဖြစ်လာသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးရှာနေကြသောအခါ, သငျသညျကိုယျအဘို့ကိုအကောင်းဆုံး #design ရသေချာပါစေ။
2 ။ ပေါင်ပေါ်အေးမြသောနှလုံးသား Tattoo
အဆိုပါနှလုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာသင်္ကေတကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာချစ်သူများ, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအင်္ဂါတို့တွင်ကျော်ကြားဖြစ်လာသည်။ သင်တစ်ဦး loner များမှာတောင်မှလျှင်, တက်တူးဒီဇိုင်းနေဆဲစုံလင်သည်။ သင်သည်သင်၏တက်တူးဒီဇိုင်း prettier ကြည့်ရှုစေနိုင်သည်
3 ။ ပခုံးပေါ်နှလုံးတက်တူး
ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ဤအပိုငျးအပျေါမှာရှိသောအခါ, prettier ရှာဖွေနေကိုရပ်တန့်မထားဘူး။ သင်ပြုသင့်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီမယ့်သူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်တဲ့အနုပညာရှင် get ရန်ဖြစ်ပါသည်။
4 ။ နောက်ကျောအပေါ်နေချင်စဖွယ်နှလုံးတက်တူးစိတ်ကူး
5 ။ စုံတွဲရဲ့လက်ပေါ်မှာလှပသောနှလုံးတက်တူး
6 ။ ဘက်ခြမ်းမှာနှလုံးတက်တူးစိတ်ကူး
7 ။ လက်ရုံးအပေါ်ကို Creative နှလုံးတက်တူး
သင်ဤတက်တူးဒီဇိုင်းချစ်စရာကောင်းတဲ့မဟုတျကွောငျးငွငျးပယျနိုငျပါဘူး။ သင်ဤကဲ့သို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တစ်ဦးတက်တူးထိုးကြတဲ့အခါမှာ, လူတွေအများကြီးအမြဲကြည့်လိမ့်မယ်။
8 ။ လက်ရုံးအပေါ်အပြည့်အဝနှလုံးတက်တူးစိတ်ကူး
9 ။ လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်နှလုံးတက်တူးထိုး #idea
10 ။ လက်ရုံးအပေါ်အေးမြနှလုံးဒီဇိုင်းကိုတက်တူးထိုး
11 ။ စုံတွဲရဲ့လက်ပေါ်မှာလှပသောနှလုံးတက်တူး
12 ။ လက်ပေါ်အံ့သြဖွယ်နှလုံးတက်တူး
13 ။ လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်နှလုံးတက်တူးစိတ်ကူး
နှလုံးတက်တူးများအသုံးပြုမှုကမ္ဘာတဝှမ်းနာမည်ကျော်တက်တူးထိုးဒီဇိုင်းများတဦးဖြစ်လာသည်။ အစဉ်အမြဲနောက်ဆုံးမှဖို့ရည်ရွယ်သည်ဟုချစ်စရာနှလုံးဒီဇိုင်းများရှိပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
14 ။ လက်နက်အပေါ်စူပါနှလုံးတက်တူး
တခါတလေကျနော်တို့တက်တူးထိုးအထူးတစ်စုံတစ်ဦးအဘို့အလက်မှတ်ရေးထိုးကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြအတွက်အပိုမိုင်သွားကြဖို့ဤအတက်တူးအပေါ် embedded အမည်များကိုရှာပါ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
15 ။ လက်ရုံးပေါ်ရောင်စုံနှလုံးတက်တူး
ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်အဆိုပါနှလုံး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အပေါ်လူတွေများ၏အမည်များ inscribing ကြသည်သောသူတို့အဘို့, ငါတို့သည်သင်တို့သတိပေးရပေမည်။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲကြာရှည်မည်ကိုတိုင်းကြားဆက်ဆံရေးမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
16 ။ ခြေထောက်ပေါ် cool နှလုံးတက်တူးစိတ်ကူး
သငျသညျထကျကျိုးပျက်ခဲ့ကြပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလူတစ်ဦး၏အမည်ကိုဖြေလျှော့ဖို့လိုတဲ့အခါဒါဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်ရှိုးဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ပိုမိုလုံခြုံဘက်မှာဖြစ်စေရန်, အမည်များကိုအသုံးမပြုပါဘူး။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
17 ။ ခြေထောက်ပေါ်ရောင်စုံနှလုံးတက်တူး
အဆိုပါတက်တူးထိုးသေးငယ်တဲ့, အပိုလွယ်သင်သည်ထိုသူတို့ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်နေစဉ်တက်တူးအဆိုပါပိုကြီးတဲ့, အခက်ခဲကြောင့်ဖုံးကွယ်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
18 ။ ပေါင်ပေါ် sexy နှလုံးတက်တူး
သင်၏နှလုံးတက်တူးထိုးခြင်း၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုအပြည့်အဝကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အတူမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းစကားကိုကလူကိုသင်အတူတကွနှစ်ခုမြင်သောအခါသင်သည်အထဲကငါပေးမည်အရာဖြစ်တယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
19 ။ မင်းသမီးအပေါ်အပြည့်အဝပြန်နှလုံးတက်တူး
သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းနောက်တစ်နေ့အရာသင်သည်သင်၏အလောင်းကောင်ပေါ်တက်တူးထိုးထားကြလိမ့်မည်ရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတည်းသင်၏မျက်စိထိုသို့လုံခြုံစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်ပါကပွင့်လင်းစေလိုသောစေနိုင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးသင်အောင်မြင်ချင်သောအရာကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
20 ။ နောက်ကျောအပေါ်အမျိုးသမီးနှလုံးတက်တူး
21 ။ အစာအိမ်အပေါ်အမျိုးသမီးနှလုံးတက်တူး
ကျနော်တို့အထွတ်အမြတ်နှလုံး, သော့ခတ်နှလုံး, ကျိုးနှလုံးနှင့်လည်းပေါ်မှာအချို့အမည်များရှိသည်သောနှလုံးသားများရှိသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
22 ။ ရင်ဘတ်ပေါ်အထီးအပြည့်အဝနှလုံးတက်တူးစိတ်ကူး
သင်တစ်ဦးတက်တူးအဖြစ်နှလုံးဒီဇိုင်း၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ချင်လျှင်, သင်ဘာသာတရားအကြောင်းပြောနေတာနိုင်ပါသည်။ ဘုံအမျိုးအစားက၎င်း၏ထိပ်တန်းကဝိုင်းရံ၌ဆူးပင်ပေါ်မီးတောက်များရှိနေပါတယ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကိုလုပ်သူများသည်တခါတရံတွင်နက်ရှိုင်းစွာဘာသာရေးဖြစ်ကြသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
23 ။ နောက်ကျောအပေါ်အမျိုးသမီးနှလုံးတက်တူး
အဆိုပါသော့ခတ်နှလုံးသားများရှည်ဆက်ဆံရေးနောက်ဆုံးလုပ်ချင်သောသူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ အမှုအရာကမှားသွားလျှင်သူတို့အပေါ်မှာအမည်များကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေမကြောက်စရာရှိသောကြောင့်ဒါဟာသူတို့ကိုအပေါ်အမည်များနှင့်အတူသူမြားကိုထက်ပိုမိုလုံခြုံသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
24 ။ ရင်ဘတ်ပေါ်အထီးအပြည့်အဝနှလုံးတက်တူးစိတ်ကူး
ပိုပြီးနှလုံး Tattoo ဒီဇိုင်းအဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
လက်တက်တူးချစ်စရာတက်တူးလက်တက်တူးခြေကျင်း Tattoosလတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးဟင်္တက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးခြေလျင်တက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းကြောင်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးFeather Tattooအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးဆင်တက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးပန်းချီတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးဂီတတက်တူးငှက်တက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများရေဘဝဲတက်တူးတက်တူးထချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးအစ်မတက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးအသင်္ချေတက်တူးနှလုံး Tattoosနေရောင်တက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးစိန်တက်တူးမျက်စိတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးစုံတွဲတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးKoi ငါးတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးrip တက်တူးမြှားတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူး